ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: eBook:Electrical Engineering Collection (1) for all my lovely friends
ရည်ညွှန်းကိုးကားစရာ နောက်ဆုံးပေါ် စာအုပ်တွေ အတော် ရှားပါးတဲ့ အခြေအနေမျိုး၊
ကိုယ်က သိချင်ပေမယ့် ရှာဖတ်လို့မရတဲ့ အခြေ အနေမျိုး ကြုံခဲ့ ရတဲ့ အတွက်
အခုလို ရှာဖွေ စုဆောင်း တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Download တဲ့အခါအဆင်ပြေအောင် တိုက်ရိုက် (Hot linking) လုပ်နိုင်တဲ့ FileDen.com ကနေ တင်ထားပေးပါတယ် ...
Download Manager / Accelerator များလည်းသုံးနိုင်ပါတယ် ...
1. Illustrated Dictionary of Electronics
STAN GIBILISCO - The Illustrate Dictionary of Electronics
2001 ခုနှစ်ထုတ် 8 th Edition ဖြစ်ပါတယ်
အီလက်ထရောနစ် နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ပုံတွေနဲ့ ရှင်းလင်း ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အဘိဓါန် ဖြစ်ပါတယ် ...
အရုပ်၊ အသံ၊ ကြိုးမဲ့ နဲ့ Consumer electronics ဘာသာရပ်တွေ အားလုံးအတွက် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ် ...
Electrical Engineering Dictionary. - by Ed. Phillip A. Laplante
PDF format - 751 pages
3. PLC for Beginners
PLC Control & Programming for Beginners
Total9Chapters & Appendix
PDF file - 255 pages
4. The Electrical Engineering Handbook (AP Series in Engineering)
မြန်မာပြည်က အင်ဂျင်နီယာ တွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ အတွက်
အတော်လေး အသုံးတည့်မယ့် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ ...
Publisher: Academic Press (October 27, 2004)
1228 Pages , PDF file
Download EEHB.rar (12.36 MB)
ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် ...
ညီအကို မောင်နှမ သူငယ်ချင်းများအားလုံး
အခုထက်ပိုပြီး ပညာဗဟုသုတများ ရရှိ အသုံးချ နိုင်ကြပါစေဗျာ...
အညွှန်း - Download, ကျွန်တော်နှင့် အီလက်ထရောနစ်, စာအုပ် eBooks, လေ့လာသင်ယူခြင်း Learning